Health Tips & Quiz
iPhone 11 Pro Max, Honda Motor Cycle, Pattaya ခရီးစဉ်အပါအဝင်အလန်းစားတန်ဖိုးကြီး ဆုလက်ဆောင်များစွာအပတ်စဉ်လစဉ် ဆက်တိုက်ရရှိနိုင်မယ့်အခွင့်အရေးတွေက သင့်ကို စောင့်ကြိုနေတာမို့ အကောင်းဆုံး ကျန်းမာရေးအကြံပြုချက်တွေနဲ့ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းတဲ့ ဉာဏ်စမ်းတွေကိုအခုပဲ ရယူလိုက်ပါ။
တစ်ရက်လျှင် ၁၄၉ ကျပ်
“Health Tips & Quiz’’ Service
၁။ Health Tips & Quiz ဝန်ဆောင်မှုဆိုတာ ဘယ်လိုမျိုးပါလဲ။
“ကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်းက ကုသခြင်းထက် ပိုမိုကောင်းမွန်၏” ဆိုသလို ကျန်းမာရေးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ ဗဟုသုတတွေကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်သိရှိနိုင်ဖို့ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းတဲ့ ကျန်းမာရေးအကြံပြုချက်များနဲ့ ဉာဏ်စမ်းမေးခွန်းများကို ရယူအသုံးပြုနိုင်တဲ့ ကဏ္ဍတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဝန်ဆောင်မှုကို မိမိတို့ မိုဘိုင်းလ်ဖုန်း SMS မှတဆင့် လွယ်လင့်တကူရယူနိုင်ပြီး ကျန်းမာရေးဉာဏ်စမ်းများစွာကို ဖြေဆိုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဝန်ဆောင်မှုကို ရယူအသုံးပြုထားသူများအတွက် အဖိုးတန် ကျန်းမာရေးအသိပညာများ ရရှိရုံသာမက တန်ဖိုးကြီး ဆုမဲပေါင်းများစွာကို ကြိမ်ဖန်များစွာ ရရှိကံထူးနိုင်ဖို့ ထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။
၂။ Health Tips & Quiz ဝန်ဆောင်မှုကို ဘယ်လိုရယူနိုင်ပါသလဲ။ ဝန်ဆောင်မှုအသုံးပြုခ ဘယ်လောက်လဲ။
Health Tips & Quiz ဝန်ဆောင်မှုကို ရယူပြီး ဆုမဲများအား ရရှိနိုင်ရန် MPT မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းဖြင့် 8123 သို့ ON ဟု ပို့ပေးရပါမယ်။ ဝန်ဆောင်မှုရယူအသုံးပြုသူအနေနဲ့ ကျန်းမာရေး အချက်အလက်များအား တစ်ရက်လျှင် Package တစ်ခုနှုန်းနဲ့ ရရှိမှာ ဖြစ်ပြီး ဝန်ဆောင်ခ ၁၄၉ ကျပ် ကျသင့်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဝန်ဆောင်မှု ရယူထားသူသည် အဆိုပါကျန်းမာရေး အကြံပြုချက်များကို ထပ်မံရယူလိုပါက ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုကို ၁၄၉ ကျပ်နှုန်းနဲ့ မိမိစိတ်ကြိုက် အကြိမ်ပေါင်းများစွာ ဝယ်ယူနိုင်ပြီး မေးခွန်းများအား ဖြေကြားကာ ရမှတ်တိုးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဝန်ဆောင်မှုရယူထားသူရဲ့ သဘောဆန္ဒအရ ဝယ်ယူမှသာ ရရှိနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
စာရင်းပေးသုံးစွဲသူများအနေနဲ့ တစ်ရက်လျှင် (၁)ကြိမ်ထက် ပိုသော ပက်ကေ့ချ် ဝယ်ယူမှုများ စိတ်ကြိုက် ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ အတိအကျ အနေဖြင့် တစ်ရက်လျှင် အများဆုံး အကြိမ် (၅၀) ဝယ်ယူနိုင်သည့် ကန့်သတ်ချက် ရှိပြီး ၎င်းမှာ ဝန်ဆောင်မှု စတင်သည့် ပထမရက်မှ စတင်ပြီး ဝန်ဆောင်မှုပြီးသည့် ကာလအထိ အများဆုံးပမာဏအနေဖြင့် ဖြည့်သွင်းမှုစုစုပေါင်း ၉၁၅၀ ကြိမ် (၅၀x ၁၈၃ ရက်) ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
၃။ ကျန်းမာရေးမေးခွန်းများကို ဖြေဆိုခြင်းဖြင့် ဘယ်လို အကျိုးကျေးဇူးတွေ ရနိုင်ပါသလဲ။
ကျန်းမာရေးမေးခွန်းများကို ဖြေဆိုခြင်းဖြင့် ကျန်းမာပျော်ရွှင်စွာ နေထိုင်နိုင်ဖို့ ဗဟုသုတများစွာသာမက အမှတ်အများဆုံး ရရှိပါက အဖိုးတန်ဆုမဲများကို ရယူနိုင်မယ့်အပြင် ကံစမ်းမဲအစီအစဉ်မှလည်း တန်ဖိုးကြီး ဆုလက်ဆောင်များ ထပ်မံကံထူးနိုင်ဦးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၄။ တတိယအကြိမ်မြောက် Health Tip & Quiz ဝန်ဆောင်မှုကို ဘယ်လောက်ကြာကြာ ကျင်းပမှာလဲ။
ဒီဝန်ဆောင်မှုကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၁ ရက်နေ့မှစ၍ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၃၁ ရက်နေ့အထိ ရက်ပေါင်း ၁၈၃ (လအားဖြင့် ၆ လ) ကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်။ အမှတ်ပြိုင်ပွဲနဲ့ ကံစမ်းမဲအစီအစဉ်ကာလမှာလည်း အလားတူ ၂၀၁၉ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၁ ရက်နေ့မှ ၂၀၂၀ ခုနှစ် မတ်လ ၃၁ ရက်နေ့အထိ ကာလအားဖြင့် (၆) လ ကြာမြင့်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၅။ ဝန်ဆောင်မှုကို ရယူထားသူအနေနဲ့ ပြန်လည်ပေးပို့တဲ့ စာတို (SMS) များအပေါ် ဝန်ဆောင်ခပေးဖို့ လိုအပ်ပါသလား။
မေးခွန်းဖြေဆိုခြင်းအပါအဝင် ပြန်လည်ပေးပို့သော စာတို (SMS) တိုင်းအတွက် မည်သည့်ဝန်ဆောင်ခမှ MPT မှ မကောက်ခံပါ။ အခမဲ့ဖြစ်ပါတယ်။
၆။ ကျန်းမာရေးအကြံပေးချက် တစ်စောင်နဲ့အတူ မေးခွန်းဘယ်လောက်ရရှိမလဲ။
ကျန်းမာရေးအကြံပေးချက် တစ်စောင်နဲ့အတူ မေးခွန်း (၅) ခု ရရှိဖြေဆိုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၇။ မိမိဖြေဆိုလိုက်တဲ့ မေးခွန်းများရဲ့ အဖြေ မှန်၊ မမှန်ကို ဘယ်လို သိရှိနိုင်ပါသလဲ။
ပထမမေးခွန်းရဲ့ အဖြေမှန်ကို ဒုတိယမြောက် မေးခွန်းရှေ့မှာ ထည့်သွင်းဖော်ပြပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၈။ ဆုလက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေကဘာတွေလဲ။ ဆုရအောင် ဘာတွေလုပ်ဆောင်ဖို့ လိုအပ်ပါသလဲ။
ဆုမဲပစ္စည်းများကို ရရှိနိုင်ရန် နည်းလမ်းနှစ်မျိုး ရှိပါတယ်။ နည်းလမ်းနှစ်မျိုးလုံးအတွက် Health Tips & Quiz ဝန်ဆောင်မှုကို ရယူထားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
ဆုအမျိုးအစား အောက်တိုဘာ ၂၀၁၉ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၉ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၉ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၉ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၀ မတ် ၂၀၂၀
၄ ကြိမ် အပတ်စဉ်ဆု
၅ ကြိမ် အပတ်စဉ်ဆု
၄ ကြိမ် Grand ဆု
၁ ကြိမ် လစဉ်ဆု
၁ ကြိမ် Grand ဆု
ဆုအမျိုးအစား အရေအတွက် ဆုပစ္စည်း
၅ ပထမဆု - ရွှေတစ်ကျပ်သား
ဒုတိယဆု - မိုဘိုင်းလ်ဟန်းဆက်
တတိယဆု - 32” TV
Grand ဆု ၁
၁ ပထမဆု - Honda Click မော်တော်ဆိုင်ကယ် + ဉာဏ်ကြီးရှင်ဖလား (ဆိုဒ်ကြီး)
ဒုတိယဆု - လက်ပ်တော့ + ဉာဏ်ကြီးရှင်ဖလား (ဆိုဒ်လတ်)
တတိယဆု - ရွှေငါးမူးသား + ဉာဏ်ကြီးရှင်ဖလား (ဆိုဒ်သေး)
အောက်ဖော်ပြပါ အချိန်ဇယားအတိုင်း ရရှိသော ဆုလက်ဆောင်များအား ပေးအပ်မည် ဖြစ်သည်။
၁ ရက် အောက်တိုဘာ ၂၀၁၉ မှ ၃၁ ရက် အောက်တိုဘာ ၂၀၁၉ : ပထမဆု - ရွှေတစ်ကျပ်သား
၁ ရက် နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၉ မှ ၃၁ ရက် နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၉ : ပထမဆု - ရွှေတစ်ကျပ်သား
၁ ရက် ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၉ မှ ၃၁ ရက် ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၉ : ပထမဆု - ရွှေတစ်ကျပ်သား
၁ ရက် ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၀ မှ ၃၁ ရက် ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၀ : ပထမဆု - ရွှေတစ်ကျပ်သား
၁ ရက် ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၀ မှ ၂၉ ရက် ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၀ : ပထမဆု - ရွှေတစ်ကျပ်သား
၁ ရက် အောက်တိုဘာ ၂၀၁၉ မှ ၃၁ ရက် မတ် ၂၀၂၀ : ပထမဆု - Honda Click မော်တော် ဆိုင်ကယ် +
ဒုတိယဆု - လက်ပ်တော့ + ဉာဏ်ကြီးရှင်ဖလား
တတိယဆု - ရွှေငါးမူးသား + ဉာဏ်ကြီးရှင်ဖလား
အမှတ်ဖြင့်ပေးအပ်သည့် ဆုလက်ဆောင်များအား ရယူနိုင်ဖို့ ကျန်းမာရေးမေးခွန်းများကို ဖြေဆိုပြီး အမှတ်များကို စုဆောင်းနိုင်ပါတယ်။ များများဖြေလေ အမှတ်များများရလေ ဆုများများရလေပေါ့။ ပက်ကေ့ချ် တစ်ခုဝယ်ယူတိုင်း အမှတ် ၅၀ အပိုရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဖြေမှန်တစ်ခုစီအတွက် ရမှတ် ၂၀ ရရှိမှာဖြစ်ပြီး အဖြေမှားနေရင်တောင် ၁၀ မှတ်စီ ရနေဦးမှာပါ။ သတ်မှတ်ထားသော အချိန်ကာလ အတွင်း အမှတ်အများဆုံးရရှိသူက ဆုပစ္စည်းများကို ရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သတ်မှတ်အချိန်ကာလများမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။
လစဉ်ဆု အချိန်ကာလ : လတစ်လ၏ ပထမရက် ၀၀:၀၀:၀၀ မှ လကုန်ရက် ၂၃:၅၉:၅၉ အထိ
Grand ဆု အချိန်ကာလ : ၂၀၁၉ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၁ ရက် ၀၀:၀၀:၀၀ မှ ၂၀၂၀ ခုနှစ် မတ်လ ၃၁ ရက် ၂၃:၅၉:၅၉
အပတ်စဉ်ဆု ၇၅ MPT ဖုန်းဘေလ် (၅၀၀၀ မှ ၄၀၀၀၀ အတွင်း) x ၃ ဆု
၁ ပထမဆု - iPhone 11 Pro Max
ဒုတိယဆု - ပတ္တယားကမ်းခြေခရီးစဉ်
တတိယဆု - ရေခဲသေတ္တာ
၁ ရက် အောက်တိုဘာ ၂၀၁၉ မှ ၇ ရက် အောက်တိုဘာ ၂၀၁၉ : MPT ဖုန်းဘေလ် (၅၀၀၀ မှ ၄၀၀၀၀ အတွင်း) x ၃ ဆု
၈ ရက် အောက်တိုဘာ ၂၀၁၉ မှ ၁၄ ရက် အောက်တိုဘာ ၂၀၁၉ : MPT ဖုန်းဘေလ် (၅၀၀၀ မှ ၄၀၀၀၀ အတွင်း) x ၃ ဆု
၁၅ ရက် အောက်တိုဘာ ၂၀၁၉ မှ ၂၁ ရက် အောက်တိုဘာ ၂၀၁၉ : MPT ဖုန်းဘေလ် (၅၀၀၀ မှ ၄၀၀၀၀ အတွင်း) x ၃ ဆု
၂၂ ရက် အောက်တိုဘာ ၂၀၁၉ မှ ၂၈ ရက် အောက်တိုဘာ ၂၀၁၉ : MPT ဖုန်းဘေလ် (၅၀၀၀ မှ ၄၀၀၀၀ အတွင်း) x ၃ ဆု
၂၉ ရက် အောက်တိုဘာ ၂၀၁၉ မှ ၄ ရက် နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၉ : MPT ဖုန်းဘေလ် (၅၀၀၀ မှ ၄၀၀၀၀ အတွင်း) x ၃ ဆု
၅ ရက် နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၉ မှ ၁၁ ရက် နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၉ : MPT ဖုန်းဘေလ် (၅၀၀၀ မှ ၄၀၀၀၀ အတွင်း) x ၃ ဆု
၁၂ ရက် နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၉ မှ ၁၈ ရက် နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၉ : MPT ဖုန်းဘေလ် (၅၀၀၀ မှ ၄၀၀၀၀ အတွင်း) x ၃ ဆု
၁၉ ရက် နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၉ မှ ၂၅ ရက် နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၉ : MPT ဖုန်းဘေလ် (၅၀၀၀ မှ ၄၀၀၀၀ အတွင်း) x ၃ ဆု
၂၆ ရက် နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၉ မှ ၂ ရက် ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၉ : MPT ဖုန်းဘေလ် (၅၀၀၀ မှ ၄၀၀၀၀ အတွင်း) x ၃ ဆု
၃ ရက် ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၉ မှ ၉ ရက် ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၉ : MPT ဖုန်းဘေလ် (၅၀၀၀ မှ ၄၀၀၀၀ အတွင်း) x ၃ ဆု
၁၀ ရက် ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၉ မှ ၁၆ ရက် ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၉ : MPT ဖုန်းဘေလ် (၅၀၀၀ မှ ၄၀၀၀၀ အတွင်း) x ၃ ဆု
၁၇ ရက် ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၉ မှ ၂၃ ရက် ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၉ : MPT ဖုန်းဘေလ် (၅၀၀၀ မှ ၄၀၀၀၀ အတွင်း) x ၃ ဆု
၂၄ ရက် ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၉ မှ ၃၀ ရက် ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၉ : MPT ဖုန်းဘေလ် (၅၀၀၀ မှ ၄၀၀၀၀ အတွင်း) x ၃ ဆု
၃၁ ရက် ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၉ မှ ၆ ရက် ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၀ : MPT ဖုန်းဘေလ် (၅၀၀၀ မှ ၄၀၀၀၀ အတွင်း) x ၃ ဆု
၇ ရက် ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၀ မှ ၁၃ ရက် ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၀ : MPT ဖုန်းဘေလ် (၅၀၀၀ မှ ၄၀၀၀၀ အတွင်း) x ၃ ဆု
၁၄ ရက် ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၀ မှ ၂၀ ရက် ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၀ : MPT ဖုန်းဘေလ် (၅၀၀၀ မှ ၄၀၀၀၀ အတွင်း) x ၃ ဆု
၂၁ ရက် ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၀ မှ ၂၇ ရက် ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၀ : MPT ဖုန်းဘေလ် (၅၀၀၀ မှ ၄၀၀၀၀ အတွင်း) x ၃ ဆု
၂၈ ရက် ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၀ မှ ၃ ရက် ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၀ : MPT ဖုန်းဘေလ် (၅၀၀၀ မှ ၄၀၀၀၀ အတွင်း) x ၃ ဆု
၄ ရက် ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၀ မှ ၁၀ ရက် ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၀ : MPT ဖုန်းဘေလ် (၅၀၀၀ မှ ၄၀၀၀၀ အတွင်း) x ၃ ဆု
၁၁ ရက် ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၀ မှ ၁၇ ရက် ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၀ : MPT ဖုန်းဘေလ် (၅၀၀၀ မှ ၄၀၀၀၀ အတွင်း) x ၃ ဆု ၁၈ ရက် ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၀ မှ ၂၄ ရက် ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၀ : MPT ဖုန်းဘေလ် (၅၀၀၀ မှ ၄၀၀၀၀ အတွင်း) x ၃ ဆု ၂၅ ရက် ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၀ မှ ၂ ရက် မတ် ၂၀၂၀ : MPT ဖုန်းဘေလ် (၅၀၀၀ မှ ၄၀၀၀၀ အတွင်း) x ၃ ဆု
၃ ရက် မတ် ၂၀၂၀ မှ ၉ ရက် မတ် ၂၀၂၀ : MPT ဖုန်းဘေလ် (၅၀၀၀ မှ ၄၀၀၀၀ အတွင်း) x ၃ ဆု
၁၀ ရက် မတ် ၂၀၂၀ မှ ၁၆ ရက် မတ် ၂၀၂၀ : MPT ဖုန်းဘေလ် (၅၀၀၀ မှ ၄၀၀၀၀ အတွင်း) x ၃ ဆု
၁၇ ရက် မတ် ၂၀၂၀ မှ ၂၃ ရက် မတ် ၂၀၂၀ : MPT ဖုန်းဘေလ် (၅၀၀၀ မှ ၄၀၀၀၀ အတွင်း) x ၃ ဆု
၁ ရက် အောက်တိုဘာ ၂၀၁၉ မှ ၃၁ ရက် မတ် ၂၀၂၀ : ပထမဆု - iPhone 11 Pro Max
ဒုတိယဆု - ပတ္တယားကမ်းခြေအလည်အပတ်ခရီးစဉ်
အပတ်စဉ် ကံစမ်းမဲ အစီအစဉ် ကို FM ရေဒီယို မှတစ်ဆင့် ရေဒီယို တိုက်ရိုက် ထုတ်လွှင့်မှု အဖြစ် ပြုလုပ်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ FM ကျန်းမာရေးဉာဏ်စမ်းတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုကို တစ်ပတ်ကို (၁)ကြိမ် ပြုလုပ်မှာပါ။ သတ်မှတ်ထားသော ရက်သတ္တပတ်အတွင်း ဝန်ဆောင်မှုရယူသူများထဲမှ ကျပန်းစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်ကာ ရေဒီယို အစီအစဉ်(၁) ပိုင်းလျှင် ပါဝင်ဖြေဆိုသူ (၃) ဦး ပြည့်တဲ့အထိ တိုက်ရိုက်ဖုန်းခေါ်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အစီအစဉ်မှာ ပါဝင်ဖြေဆိုဖို့ သဘောတူညီမှု ယူပြီးတဲ့အခါ အစီအစဉ် တင်ဆက်သူမှ ပါဝင်သူ တစ်ဦးစီကို ကျန်းမာရေး ဉာဏ်စမ်းများ မေးပြီး ဉာဏ်စမ်းဖြေသူများ က အဖြေမှန် အရေအတွက်အလိုက် ဆုများ ရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဝန်ဆောင်မှုကာလ (၆)လအတွက် Grand ဆုကြီးများ ကံထူးရှင်များ ကို ဝန်ဆောင်မှု အသုံးပြုသူ အားလုံးထဲမှ ကျပန်းစနစ်ဖြင့် မဲဖောက်ရွေးချယ်သွားမှာ ဖြစ်ပြီး အမှတ်ဖြင့် Grand ဆုကြီးများ လက်ဆောင်ပေးမယ့် အချိန်တွင် ပေးအပ်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၉။ အပတ်စဉ်ဆုအတွက် ဒီတစ်ပတ်မှာ ရလိုက်တဲ့အမှတ်က နောက်တစ်ပတ်မှာ အကျုံးဝင်ပါသလား။
အပတ်စဉ်ဆုများအတွက် အရင်အပတ်မှ ရရှိထားတဲ့ အမှတ်တွေကို ထည့်ပေါင်းပေးမှာ မဟုတ်ပါ။ အပတ်စဉ်တိုင်း အမှတ်သစ် သုည (ဝ) မှ စတင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အပတ်တိုင်းရရှိထားတဲ့ အမှတ်များကို Grand ဆု အတွက် ဆက်လက်ပေါင်းထည့်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၁၀။ ဝန်ဆောင်မှုစတင်အသုံးပြုချိန်မှ ရရှိထားတဲ့ အမှတ်တွေက နောက်ဆုံး ဝန်ဆောင်မှုပြီးဆုံးချိန်အထိ အကျုံးဝင်ပါသလား။
ဟုတ်ပါတယ်။ သင်ရရှိထားတဲ့ အမှတ်စုစုပေါင်းက ဝန်ဆောင်မှုပြီးဆုံးချိန် ၂၀၂၀ ခုနှစ် မတ်လ ၂၅ရက် နေ့အထိ အကျုံးဝင်ပါတယ်။ သတ်မှတ်ထားသော ဝန်ဆောင်မှုစတင်ချိန်မှ ပြီးဆုံးချိန်အထိ ရရှိထားသမျှ အမှတ်စုစုပေါင်း နဲ့ Grand ဆုကြီးများကို ရွေးချယ်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၁၁။ အမှတ်ပိုရရှိနိုင်ဖို့ အခြားနည်းလမ်းတွေ ရှိပါသလား။
ဟုတ်ကဲ့ ရှိပါတယ်။ ပက်ကေ့ချ်အပို လက်ဆောင် မှ လည်းကောင်း၊ အထူးအစီအစဉ်များ မှလည်းကောင်း အမှတ်ပို ရရှိနိုင်ပါတယ်။
၁၂။ OTP (ထပ်ဆောင်းဝယ်ယူမှု) ပက်ကေ့ချ်အပို လက်ဆောင်ကို ဘယ်လို ရရှိနိုင်သလဲ။
ဝန်ဆောင်မှုရယူထားသူအနေနဲ့ HTQ ဟု ပေးပို့ပြီး ပက်ကေ့ချ် (၁၀) ခု ဝယ်ယူတိုင်း ပက်ကေ့ချ် အပို လက်ဆောင် (၁) ခု ရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ စာရင်းပေးသွင်းထားသောကြောင့် ပုံမှန်ရရှိမယ့် ပက်ကေ့ချ် တစ်ခုအား ထည့်တွက်မည် မဟုတ်ပါ။
၁၃။ Happy Hour ဆိုတာ ဘာလဲ။
Happy Hour ကတော့ အပတ်စဉ် တနင်္လာနေ့မှ သောကြာနေ့ ည (၇)နာရီ မှ (၉)နာရီအတွင်း အချိန် ၂ နာရီ ကြာမြင့်မှာ ဖြစ်တယ်။ Happy Hour အတွင်း ဖြေဆိုသော ဉာဏ်စမ်းများရဲ့ ရမှတ်များဟာ အလိုအလျောက် နှစ်ဆ ပြောင်းလဲသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
(က) Happy Hour မှာ ရရှိလာတဲ့ အမှတ်များကို နောက်ဆုရရှိမယ့် ပြိုင်ပွဲအမှတ်စာရင်းထဲမှာ ထည့်ပေါင်းပေးပါသလား။
၁၄။ Weekend Challenge ဆိုတာ ဘာလဲ။
Weekend Challenge ကတော့ အပတ်စဉ် စနေနေ့နှင့်တနင်္ဂနွေနေ့များတွင် ရမှတ် အများဆုံး ဝယ်ယူဖြေဆိုနိုင်သူအား အမှတ်အပိုဆောင်း ၅၀၀၀ ထည့်ပေါင်းပေးမယ့် အစီအစဉ် ဖြစ်ပါတယ်။ (စနေနေ့ မနက် ၀၀:၀၀ နာရီ မှ တနင်္ဂနွေနေ့ ည ၁၁:၅၉ နာရီ အထိ)
(က) Weekend Challenge မှာ ရရှိလာတဲ့ အမှတ်များကို နောက်ဆုရရှိမယ့် ပြိုင်ပွဲ အမှတ်စာရင်းထဲမှာ ထည့်ပေါင်းပေးပါသလား။
၁၅။ Loyalty Bonus (ဖောက်သည်) ဆိုတာ ဘာလဲ။
စာရင်းပေးပြီး (၁၀) ရက် ဆက်တိုက် ဝန်ဆောင်မှု မှာ နေ့စဉ် ပါဝင်သူများကို ဖောက်သည် အဖြစ်သတ်မှတ်ပြီး (၁၀) ရက် ပြည့်တိုင်း အမှတ် ၁၀၀၀ ကို အပိုဆောင်း ထည့်ပေါင်းပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ (၁၀) ရက်အတွင်း လက်ကျန်ငွေ မလုံလောက်၍ ငွေကောက်ခံမရသောအခါ (သို့) (၁၀) ရက်မပြည့်မီ ဝန်ဆောင်မှုမှ နှုတ်ထွက်သောအခါ ဖောက်သည် ဟု မသတ်မှတ်ပါ။
(က) ဖောက်သည် အဖြစ် ရရှိလာတဲ့ အမှတ်များကို နောက်ဆုရရှိမယ့် ပြိုင်ပွဲအမှတ်စာရင်းထဲမှာ ထည့်ပေါင်းပေးပါသလား။
၁၆။ ဝန်ဆောင်မှု ရယူအသုံးပြုနိုင်မယ့် ကာလကို ပြောပြပါ။
တတိယအကြိမ်မြောက် Health Tips & Quiz ဝန်ဆောင်မှုကို ခြောက်လအပိုင်းအခြားဖြင့် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၁ ရက်နေ့မှ စတင်ပြီး ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၃၁ ရက်နေ့အထိ ရယူအသုံးပြုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဝန်ဆောင်မှုပြီးဆုံးသည့် ကာလနောက်ပိုင်း ရရှိသော ဘယ်အချက်အလက်မဆို အဆိုပါဆုပစ္စည်းများ ရယူနိုင်မယ့် အစီအစဉ်တွင် အကျုံးမဝင်ပါ။
၁၇။ Health Tips & Quiz ဝန်ဆောင်မှုရယူထားခြင်းကို ဘယ်လို ပိတ်သိမ်းနိုင်ပါသလဲ။
ဝန်ဆောင်မှုကို ရယူထားသူအနေနဲ့ ကုဒ်နံပါတ် 8123 သို့ OFF ဟု ပေးပို့ကာ ဝန်ဆောင်မှုရယူထားခြင်းကို ပယ်ဖျက်နိုင်ပါတယ်။
၁၈။ ဘယ်လိုဖုန်းအမျိုးအစားများတွေနဲ့ Health Tips & Quiz ဝန်ဆောင်မှုမှာ ပါဝင်နိုင်သလဲ။
SMS လက်ခံရယူခြင်းနဲ့ ပေးပို့ခြင်းကို လုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ ဘယ်ဖုန်းအမျိုးအစားမဆို Health Tips & Quiz ဝန်ဆောင်မှုကို ရယူအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ တချို့မော်ဒယ်လ်နိမ့်လွန်းတဲ့ ဖုန်းအမျိုးအစားများမှာတော့ စာရှည်လျား လွန်းသော SMS များ လက်ခံရရှိချင်မှ ရရှိပါမယ်။
၁၉။ ကျန်းမာရေးဉာဏ်စမ်း ဝန်ဆောင်မှုကို ဘယ်သူတွေ ရယူအသုံးပြုနိုင်ပါသလဲ။
ဝန်ဆောင်မှုကို ရယူလိုလျှင် အောက်ပါအချက်များနဲ့ ကိုက်ညီရပါမယ်။
• MPT အသုံးပြုသူများ
• အသက် (၁၈) နှစ်နှင့် အထက် စာရင်းပေးသုံးစွဲသူများ (သို့မဟုတ်) (၁၈) နှစ်အောက်ဖြစ်ပါက ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုရန် မိဘ/အုပ်ထိန်းသူ၏ ခွင့်ပြုချက်ရရှိသူများ
• မြန်မာနိုင်ငံတွင် အမြဲတမ်းနေထိုင်ခွင့်ရသူများ
၂၀။ အမှတ်ပြိုင်ပွဲ နှင့် ကံစမ်းမဲ အစီအစဉ်တွင် ဘယ်သူတွေ ပါဝင်ခွင့် မရှိဘူးလဲ။
အောက်ဖော်ပြပါအချက် (၁)ခုနဲ့ ညှိစွန်းပါက ဆုအစီအစဉ်တွင် ပါဝင်ခွင့် မရှိပါ။
• MPT SIM Card အသုံးမပြုသူများ သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုကို ရယူမထားသူများ
• (၁၈) နှစ်အောက်ဖြစ်ပြီး မိဘ/အုပ်ထိန်းသူ၏ ခွင့်ပြုချက် မရရှိထားသူများ
• မြန်မာနိုင်ငံတွင် အမြဲတမ်းနေထိုင်ခွင့်မရသူများ
• ဤပြိုင်ပွဲကို စီစဉ်သည့် ကုမ္ပဏီများတွင် အလုပ်လုပ်သူများ၊ MPT၊ Trust Oo၊ ဤဝန်ဆောင်မှု နဲ့ တိုက်ရိုက် သက်ဆိုင်သော ၎င်းတို့၏ မိတ်ဖက် အဖွဲ့အစည်းများအားလုံး
၂၁။ ဝန်ဆောင်မှုကို ရယူထားသူအနေနဲ့ ကျန်းမာရေး မေးခွန်းများ ဖြေဆိုဖို့ အချိန်ဘယ်လောက် ရပါသလဲ။
ဝန်ဆောင်မှုကို ရယူထားသူအနေနဲ့ ကျန်းမာရေးမေးခွန်းတစ်ခု စတင်ရရှိသော အချိန်မှစပြီး နောက်တစ်ရက် အတွင်း အလိုအလျောက် ပေးပို့သော Package အသစ်ရရှိချိန်အထိ ဖြေဆိုချိန်ရရှိပါမယ်။ ဝယ်ယူထားသောမေးခွန်းအရေ အတွက်မှာမူ သက်တမ်းကုန်ဆုံးခြင်း မရှိပဲ မိမိ ဝယ်ယူထားသော အရေအတွက် အတိုင်း ဝန်ဆောင်မှု ကာလ အတွင်း စိတ်ကြိုက်ဖြေဆိုနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
၂၂။ ဝန်ဆောင်မှုပေးသူဘက်က ဝန်ဆောင်မှုရယူထားသူကို အသုံးပြုမှု ရပ်ဆိုင်းနိုင်ရန် ပြုလုပ်ပေးပါသလား။
ဝန်ဆောင်မှုရယူထားသူကိုယ်တိုင် အသုံးပြုမှုရပ်ဆိုင်းဖို့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ Keyword ဖြစ်သည့် OFF ဟု ပြန်လည်ပေးပို့မှသာ ဝန်ဆောင်မှုကို ရပ်ဆိုင်းနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဝန်ဆောင်မှုပေးသူဘက်က အခြားနည်းလမ်းနဲ့ လုပ်ဆောင်ပေးမှာ မဟုတ်ပါ။
၂၃။ အမှတ်အများဆုံး ရရှိထားသူတစ်ဦးအနေနဲ့ ကံစမ်းမဲအစီအစဉ်မှာရော တပြိုင်နက် ပါဝင်ကံစမ်းခွင့် ရှိပါသလား။ ရှေ့မှာဆုရဖူးရင် နောက်ထပ်ရော ဆုရနိုင်သေးလား။
ဟုတ်ပါတယ်။ အမှတ်အများဆုံး ရရှိထားသူတစ်ဦးအနေနဲ့ အမှတ်ပြိုင်ပွဲမှ ဆုပစ္စည်းများ ရရှိနိုင်ရုံသာမက ကံစမ်းမဲ အစီအစဉ်တွင်လည်း ဆုလက်ဆောင်များ တပြိုင်နက်တည်း ပါဝင်ကံထူးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ရှေ့မှာဆုရထားခဲ့ရင်လည်း အပတ်စဉ်၊ လစဉ်၊ Grand စသဖြင့် ဆုများစွာကို ထပ်ခါတလဲလဲ ရယူနိုင်ဦးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အမှတ်များများရလေ မိမိအတွက် အခွင့်အရေးများများရလေပေါ့။
၂၄။ ဆုလက်ဆောင်ပစ္စည်းများကို ဘယ်လို ထုတ်ယူရရှိနိုင်ပါသလဲ။
ဆုရရှိသူများအား ဝန်ဆောင်မှုပေးသူဘက်မှ ဖုန်းဖြင့် ဆက်သွယ်ပြီး ဆုလက်ဆောင်ပစ္စည်းများကို ထုတ်ယူနိုင်ဖို့ စနစ်တကျ စီစဉ်ပေးအပ်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၂၅။ ကျန်းမာရေး စာတိုနဲ့ ဉာဏ်စမ်းများကို ဘယ်သူတွေ ပြုစုရေးသားထားလဲ။
ဒီကျန်းမာရေး အကြံပြုချက်များနဲ့ ဉာဏ်စမ်းမေးခွန်းများကို ပြည်သူအများ ကျန်းမာရေးဗဟုသုတ တိုးပွားစေရန် ရည်ရွယ်၍ ဆရာဝန်များကိုယ်တိုင် ပြုစုရေးသားခဲ့ပါတယ်။
၂၆။ ဒီအစီအစဉ်ရဲ့ အဓိကရည်ရွယ်ချက်က ဘာလဲ။ ဘာလို့ ကျန်းမာရေး ဉာဏ်စမ်းတွေ ထည့်မေးတာလဲ။
“ကာကွယ်ခြင်းသည် ကုသခြင်းထက် ပိုမိုကောင်းမွန်သည်” လို့ ဆိုသလို ဒီကျန်းမာရေး အကြံပြုချက်နှင့် ဉာဏ်စမ်းမေးခွန်း ဝန်ဆောင်မှုမှာ အဆင့်ဆင့် မေးခွန်းများမေးပြီး ကျန်းမာရေး ဗဟုသုတ မြှင့်တင်ဖို့ အောက်ပါအတိုင်း ရည်ရွယ်ပါတယ်။
- MPT အသုံးပြုသူများကြားမှာ ကျန်းမာရေးအသိပညာ တိုးတက်လာပြီး ကျန်းမာပျော်ရွှင်သော ဘဝကို ဖော်ဆောင်နိုင်ရန်
- ဝန်ဆောင်မှုကို စိတ်ဝင်တစား အသုံးပြုသူများအတွက် အလန်းစား ဆုလက်ဆောင်များ ပေးအပ်ရန်
- တန်ဖိုးကြီး ဆုလက်ဆောင်များဖြင့် ဆွဲဆောင်၍ ကျန်းမာရေး အသိပညာများကို တက်တက်ကြွကြွ လေ့လာဖြစ်ရန်
၂၇။ ဝန်ဆောင်မှုတွင် ကုဒ်နံပါတ် 8123 သို့ ပေးပို့နိုင်မယ့် Keywords များရဲ့ အဓိပ္ပာယ်ကို ရှင်းပြပါ။
ON - ဝန်ဆောင်မှုကို ရယူရန် 8123 သို့ ON ဟုပေးပို့ပါ။
OFF - ဝန်ဆောင်မှုကို ပယ်ဖျက်နိုင်ရန် 8123 သို့ OFF ဟုပေးပို့ပါ။
HTQ - ကျန်းမာရေးအကြံပြုချက်နှင့် မေးခွန်းများကို ထပ်မံဝယ်ယူရန် 8123 သို့ HTQ ဟု ပေးပို့ပါ။
POINTS - မိမိရရှိထားသော လက်ရှိ အမှတ်များကို သိနိုင်ရန် 8123 သို့ POINTS ဟုပေးပို့ပါ။
HELP - ဝန်ဆောင်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ အကူအညီလိုပါက 8123 သို့ HELP ဟုပေးပို့ပါ။
1 (or)2- မေးခွန်းများအား ဖြေဆိုရန် 8123 သို့ 1 (သို့)2ဟုပေးပို့ပါ။
1. What is “Health Tips & Quiz” Service?
Prevention is better than cure. Health Tips & Quiz is an attractive way of delivering health education step-wise to the subscribers via health tips andaseries of health-related questions. This isaSMS text-based service where the customers can access important health tips whilst havingachance to participate in an interactive health quiz. There are multiple chances forasubscriber to win useful big prizes.
2. How do I use “Health Tips & Quiz” Service?
How much is the user charged for this service?
To be able to access the health tips and play the quiz, the participants must send ON to 8123. The subscribers will receive 1 daily package and be charged at the rate of 149 MMK / package (1 tip +5questions). A subscriber can also purchaseanumber of additional packages of health tips and quiz at the rate of 149 MMK / package and earn points, but it is done only by the user request (pull).
The Subscribers can purchase more than one (1) package per day. To be exact, there isalimitation of fifty (50) charges per day that accumulates since day one (1) of Service commencement, reachingamaximum quota of 9,150 charges (50 x 183 days) at the end of the Season.
3. What kind of benefits can I get by answering the quiz?
You will enjoy the rewards for either having the highest scores or just being lucky by drawing lots whilst gaining your knowledge about how to liveahealthier life.
4. How long will the Season-3 of Health Tips & Quiz take place?
The Season-2 commences from 1st Oct, 2019 until 31st Mar, 2020 for 183 days (six months).
Likewise, the duration of the Point Contest and the Lucky Draw program will be six (6) months, starting from
1st Oct, 2019 to 31st Mar, 2020.
5. Are the SMSs free-of-charge when the Subscribers reply?
6. How many questions shall I receive if I buyahealth tip?
There shall be five questions which will follow each tip you purchase.
7. How shall I know if my answer is correct or not?
The correct answer to the first question will always be revealed in the text SMS of the next question.
8. Which prizes can I win and how can I win them?
There are two ways of winning the prizes. In both ways, the users must subscribe the Health Tips & Quiz service.
Type of Reward Oct/2019 Nov-19 Dec-19 Jan-20 Feb-20 Mar-20
Lucky Draw Prizes Weekly Prize
4 times Weekly Prize
5 times Weekly Prize
4 times Grand Prize
Point Contest Prizes Monthly Prize
1 time Monthly Prize
1 time Grand Prize
8.1. Point Contest
Type of Rewards Quantity Rewards
Monthly Prizes 5
5 First Prize - Gold 1 Tical
Second Prize - Smart Phone
Third Prize - Smart TV
Grand Prizes 1
1 First Prize - Honda Click Motor Cycle + Genius Trophy (Large)
Second Prize - High-end Laptop + Genius Trophy (Medium)
Third Prize - Gold 0.5 Tical + Genius Trophy (Small)
The Rewards shall be rewarded to the winners according to the following schedule.
1st Oct 2019 - 31st Oct 2019 : First Prize - Gold 1 Tical
1st Nov 2019 - 30th Nov 2019 : First Prize - Gold 1 Tical
1st Dec 2019 - 31st Dec 2019 : First Prize - Gold 1 Tical
1st Jan 2020 - 31st Jan 2020 : First Prize - Gold 1 Tical
1st Feb 2020 - 29th Feb 2020 : First Prize - Gold 1 Tical
1st Oct 2019 - 31st Mar 2020 : First Prize - Honda Click Motor Cycle + Genius Trophy (Large)
To increase chances to win, the participants can answer more questions and score more points that are convertible to more chances. Every package carries 50 points whenever the subscriber receives it. Each correct answer gives 20 points whileawrong answer still gives 10 points. The participant with the highest score during the respective time period will be the winner. Please refer to the following time interval.
• Monthly Reward Period : Day 1 00:00:00 of the month till 23:59:59 of the last day of the month
• Grand Reward Period : 1st Oct 2019 00:00:00 till 31st Mar 2020 23:59:59
8.2. Lucky Draw Program
Weekly Prizes 75 MPT Top-Up (5,000 Ks to 40,000 Ks) x3pcs
1 First Prize - iPhone 11 Pro Max
Second Prize - Trip to Pattaya (Two Persons)
Third Prize - Refrigerator
The Rewards will be rewarded to the winners according to the following schedule.
1st Oct 2019 - 7th Oct 2019 : MPT Top-Up (5,000 Ks to 40,000 Ks) x3pcs
8th Oct 2019 - 14th Oct 2019 : MPT Top-Up (5,000 Ks to 40,000 Ks) x3pcs
15th Oct 2019 - 21st Oct 2019 : MPT Top-Up (5,000 Ks to 40,000 Ks) x3pcs
22nd Oct 2019 - 28th Oct 2019 : MPT Top-Up (5,000 Ks to 40,000 Ks) x3pcs
29th Oct 2019 - 4th Nov 2019 : MPT Top-Up (5,000 Ks to 40,000 Ks) x3pcs
5th Nov 2019 - 11st Nov 2019 : MPT Top-Up (5,000 Ks to 40,000 Ks) x3pcs
12nd Nov 2019 - 18th Nov 2019 : MPT Top-Up (5,000 Ks to 40,000 Ks) x3pcs
19th Nov 2019 - 25th Nov 2019 : MPT Top-Up (5,000 Ks to 40,000 Ks) x3pcs
26th Nov 2019 - 2nd Dec 2019 : MPT Top-Up (5,000 Ks to 40,000 Ks) x3pcs
3rd Dec 2019 - 9th Dec 2019 : MPT Top-Up (5,000 Ks to 40,000 Ks) x3pcs
10th Dec 2019 - 16th Dec 2019 : MPT Top-Up (5,000 Ks to 40,000 Ks) x3pcs
17th Dec 2019 - 23rd Dec 2019 : MPT Top-Up (5,000 Ks to 40,000 Ks) x3pcs
24th Dec 2019 - 30th Dec 2019 : MPT Top-Up (5,000 Ks to 40,000 Ks) x3pcs
31st Dec 2019 - 6th Jan 2020 : MPT Top-Up (5,000 Ks to 40,000 Ks) x3pcs
7th Jan 2020 - 13rd Jan 2020 : MPT Top-Up (5,000 Ks to 40,000 Ks) x3pcs
14th Jan 2020 - 20th Jan 2020 : MPT Top-Up (5,000 Ks to 40,000 Ks) x3pcs
21st Jan 2020 - 27th Jan 2020 : MPT Top-Up (5,000 Ks to 40,000 Ks) x3pcs
28th Jan 2020 - 3rd Feb 2020 : MPT Top-Up (5,000 Ks to 40,000 Ks) x3pcs
4th Feb 2020 - 10th Feb 2020 : MPT Top-Up (5,000 Ks to 40,000 Ks) x3pcs
11st Feb 2020 - 17th Feb 2020 : MPT Top-Up (5,000 Ks to 40,000 Ks) x3pcs
18th Feb 2020 - 24th Feb 2020 : MPT Top-Up (5,000 Ks to 40,000 Ks) x3pcs
25th Feb 2020 - 2nd Mar 2020 : MPT Top-Up (5,000 Ks to 40,000 Ks) x3pcs
3rd Mar 2020 - 9th Mar 2020 : MPT Top-Up (5,000 Ks to 40,000 Ks) x3pcs
10th Mar 2020 - 16th Mar 2020 : MPT Top-Up (5,000 Ks to 40,000 Ks) x3pcs
17th Mar 2020 - 23rd Mar 2020 : MPT Top-Up (5,000 Ks to 40,000 Ks) x3pcs
1st Oct 2019 - 31st Mar 2020 : First Prize - iPhone 11 Pro Max
Weekly lucky draw would be made as radio quiz live show through FM radio. FM health quiz live program shall be made onceaweek. The quiz takers would be chosen randomly from the active service subscribers during the identified weekly period and makeasurprise call to those until reaching three participants during each episode. After being accepted to participate, the presenter asks health quizzes to each participant and the quiz takers would receive prizes depending on the number of correct answers.
Grand lucky draw rewards would be offered randomly at the end of the season, together with grand point contest rewards.
9. With regards to the weekly rewards, are the points I earn this week going to be taken into account next week?
That kind of points collected withinaparticular week will not be added for the next weekly rewards. Every week, the score starts from zero again for the weekly rewards. However, the points earned every week shall accumulate over time to entitle monthly, quarterly and grand rewards.
10. Are the points I have earned since I subscribed the Service taken into account till the end of this service?
Yes, the total score you have reached will be valid till the end of the service which is 25th Mar, 2020. We will nominate the winners of the grand prizes according to their total score gained over the entire period.
11. Are there some ways to get additional points?
Yes, there are. You can obtain additional points via bonus package and real-time mechanics.
12. How can I get OTP bonus package?
The subscribers would receive one bonus package for each and every additional purchase of ten OTP packages. Daily-subscribed purchases would not be regarded as OTP bonus purchase.
13. What is “Happy Hour”?
Happy Hour lasts two hours form7PM to9PM and occurs on weekdays (Monday to Friday). The points of playing quizzes will be doubled during happy hours.
10.1 Will the extra points earned during Happy Hour be added to the upcoming prize programs?
Yes, they shall be added in the same manner.
14. What is “Weekend Challenge”?
Weekend Challenge isanew weekly mechanic of giving 5,000 bonus points to the player with the highest score during the weekend (from 00:00 AM of Saturday to 11:59 PM of Sunday).
14.1 Will the points earned during Weekend Challenge be added to the upcoming prize programs?
15. What is “Loyalty Bonus”?
Loyalty Bonus rewards any subscriber who keeps using the service daily (daily subscription) inatotal of 10 days inarow. This loyal subscriber shall gain extra 1,000 points as bonus for every 10 consecutive subscription days. If the subscriber cannot be charged due to low balance or has unsubscribed before reaching the tenth day, the user will not be entitled to Loyalty Bonus.
15.1 Will the points earned as Loyalty Bonus be added to the upcoming prize programs?
16. What is the duration of the Service?
“Health Tips & Quiz” Service will run for six months as Season -3from 1st Oct, 2019 till 31st Mar, 2020. Any entry received after the end date shall be considered invalid for the aforementioned rewards.
17. How do I unsubscribe the “Health Tips & Quiz” service?
A participant may unsubscribe “Health Tips & Quiz” service by sending OFF to short code 8123.
18. Which phones can support the “Health Tips & Quiz” service?
“Health Tips & Quiz” service is supported by most of the mobile phone handsets: any featured phone or smartphone that is able to receive and send SMS text. If the handset is however outdated, it may not receive long SMS.
19. Who are eligible to participate in the Health Tips & Quiz service?
One has to meet the following criteria to subscribe this service.
• MPT users
• Users who are 18 years of age or above or Subscribers who are under 18 years of age but have obtainedaconsent fromaguardian
• Users who are permanent residents of Myanmar
20. Who are the ineligible participants for Point Contest and Lucky Draw Program?
The following participants are NOT eligible to participate in Point Contest and Lucky Draw Program.
• People who do not use MPT or subscribe the Service
• People who are under 18 years old and have not obtainedaconsent fromaguardian
• People who are not permanent residents of Myanmar
• People who work in the companies that are organizing this Service: MPT, Trust Oo and their affiliates which are directly related to the Service
21. How long do I wait foraquestion to expire?
The health question received onaparticular day shall expire when the Subscriber receivesanew package which is automatically sent by the Service Provider on the very next day.
However, the total number of questions purchased by the Subscriber shall not expire and the Subscriber can answer the same number of questions anytime during the service period.
22. Can the Service Provider forcefully stop the Subscriber from using the Service?
It is only the subscriber who can reply OFF to unsubscribe the Service. The Service Provider shall not perform this action in any other method.
23. Is the highest scorer entitled to prize by draw in the same round?
Can I win more prizes in the future if I won in the past?
Yes, the subscriber whose score is the highest shall win the prize by points but also be entitled to win the prize by draw at the same time.
Even if you had won earlier, you are entitled to win multiple times such as weekly, monthly, and grand prizes. The higher the score, the bigger the opportunity.
24. How can I claim my rewards?
The Service Provider shall contact the winners by phone to arrange the necessary logistics for receiving the rewards properly.
25. Who created these Health Tips & Quiz questions?
These health tips and quiz questions are created by the doctors in order to improve the health knowledge of the general public.
26. What is the main purpose of the Service? Why do you ask health-related quiz?
“Prevention is better than cure”. Likewise, this Health Tips & Quiz service asks the users different types of questions to uplift their status of health knowledge as follows:
- To encourage the MPT users to advance health knowledge and bring about healthy and happy lives
- To give special rewards to those loyal subscribers
- To make use of those rewards as incentives for the users to actively seek health knowledge
27. What are the keywords that I can send to the short code 8123 in this particular service?
ON : Send ON to 8123 to subscribe the service
OFF : Send OFF to 8123 to unsubscribe the service
HTQ : Send HTQ to 8123 to purchase additional contents
POINTS : Send POINTS to check your current scores
HELP : Send HELP to 8123 to ask for help
1 or2: Send 1 or2to answer the quiz
ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ အကြံပြုချက်များနှင့် ဉာဏ်စမ်းအမေးအဖြေဝန်ဆောင်မှု
(Health Tips & Quiz)
ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ အကြံပြုချက်များနှင့် ဉာဏ်စမ်းအမေးအဖြေဝန်ဆောင်မှု (ဤနေရာမှ ဝန်ဆောင်မှု ဟု ရည်ညွှန်းရန်) ကို စာရင်းပေးသုံးစွဲခြင်းဖြင့် MPT ၏ စာရင်းပေးသုံးစွဲသူများ (“စာရင်းပေးသုံးစွဲသူ” သို့မဟုတ် “စာရင်းပေးသုံးစွဲသူများ”) သည် ဤစာချုပ်ထဲတွင် သတ်မှတ်ထားသော စည်းကမ်းချက်များကို နားလည်ပြီး သဘောတူပါသည်။ ဤဝန်ဆောင်မှုသည် စည်းကမ်းချက်များနှင့် ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်၏ သက်ဆိုင်ရာ ဥပဒေများ၊ စည်းမျဉ်းများနှင့် အညီဖြစ်ရမည်။
ဤဝန်ဆောင်မှုကို အမှတ် ၁၄၈ (၁၁/က)၊ မြမာလာလမ်းသွယ်၊ အေဝမ်းလမ်း၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုနု်မြို့ တွင် ရုံးချုပ်အခြေစိုက်သော Trust Oo Co., Ltd. (“ဝန်ဆောင်မှုပေးသူ”) မှ စီစဉ်ဆောင်ရွက်သည်။
၂.၁။ ဤဝန်ဆောင်မှုကို ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ အကြံပြုချက်များ နှင့် ဉာဏ်စမ်းအမေးအဖြေ ဝန်ဆောင်မှုဟု ခေါ်ဆိုရမည်။
၂.၂။ ဤဝန်ဆောင်မှုသည် နေရာဒေသနှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာ အခက်အခဲ ကန့်သတ်ချက်များ မရှိစေပဲ မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းများမှတဆင့် စာရင်းပေးသုံးစွဲသူများ ကျန်းမာရေးဗဟုသုတ မြှင့်တင်ရန် ရည်ရွယ် သည်။
၂.၃။ ဤဝန်ဆောင်မှုသည် စာတိုပေးပို့မှုစနစ်ကို အခြေခံသော ဝန်ဆောင်မှုဖြစ်ပြီး ဝန်ဆောင်မှု အသုံးပြုသူများအနေဖြင့် ကျန်းမာရေးနှင့်သက်ဆိုင်သော အပြန်အလှန် ဉာဏ်စမ်းအမေးအဖြေ ကဏ္ဍတွင် ပါဝင်လျက် ကျန်းမာရေးအကြံပြုချက်များ ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ စာရင်းပေးသုံးစွဲသူများ အနေဖြင့် ပိုမိုကျန်းမာသော ဘဝနေထိုင်မှုအတွက် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ဗဟုသုတများ ရရှိမည့်အပြင် အမှတ်အများဆုံး ရရှိခြင်းဖြင့်လည်းကောင်း၊ ကံစမ်းမဲများ ကံထူးခြင်းဖြင့် လည်းကောင်း ဆုလက်ဆောင်များ ခံစားနိုင်ပါသည်။
၃။ ဝန်ဆောင်မှု ပက်ကေ့ချ်
ဝန်ဆောင်မှု ပက်ကေ့ချ် (“ဝန်ဆောင်မှု ပက်ကေ့ချ်” သို့မဟုတ် “ဝန်ဆောင်မှု ပက်ကေ့ချ် များ”) တွင် ကျန်းမာရေးအကြံပြုချက် တစ်ခုနှင့် ကျန်းမာရေးနှင့် သက်ဆိုင်သော မေးခွန်း (၅) ခု ပါဝင်မည် ဖြစ်သည်။
၄။ ဝန်ဆောင်မှု ဈေးနှုန်း
၄.၁။ စတင်စာရင်းပေးသုံးစွဲသူများအနေဖြင့် ဝန်ဆောင်မှုအား တစ်ရက်လျှင် ပက်ကေ့ချ် တစ်(၁)ခု နှုန်း ရရှိမည် ဖြစ်သည်။
၄.၂။ စာရင်းပေးသုံးစွဲသူများကို ဝန်ဆောင်မှု ပက်ကေ့ချ် တစ်ခုလျှင် (၁၄၉) ကျပ်နှုန်း ကောက်ခံမည် ဖြစ်သည်။
၅။ ဝန်ဆောင်မှုကို စာရင်းပေးသုံးစွဲခြင်း
၅.၁။ သုံးစွဲသူများသည် ကုဒ်နံပါတ် 8123 သို့ ON ဟု ပေးပို့ခြင်းဖြင့် စာရင်းပေးသုံးစွဲနိုင်သည်။
၅.၂။ သုံးစွဲသူများသည် ကုဒ်နံပါတ် 8123 သို့ OFF ဟု ပေးပို့ခြင်းဖြင့် စာရင်းမှ ပယ်ဖျက်နိုင်သည်။
၆။ ဝန်ဆောင်မှု ရရှိပုံ အဆင့်ဆင့်
၆.၁။ ဝန်ဆောင်မှုကို စာရင်းပေးသွင်းပြီးနောက် ကြိုဆိုသည့် စာစောင် (Welcome Message) ကို ရရှိမည် ဖြစ်သည်။
၆.၂။ ကြိုဆိုသည့် စာစောင်ရရှိပြီးနောက် ကျန်းမာရေးအကြံပြုချက်တစ်(၁)ခု ပါဝင်သည့် ပထမဆုံး စာတိုကို ရရှိမည် ဖြစ်သည်။
၆.၃။ ထို့နောက် ကျန်းမာရေးနှင့်သက်ဆိုင်သော မေးခွန်းနံပါတ် (၁) ကို ဒုတိယမြောက် စာတိုတွင် ရရှိမည် ဖြစ်သည်။
၆.၄။ တတိယမြောက် စာတိုကို ရရှိနိုင်ရန် စာရင်းပေးသုံးစွဲသူများအနေဖြင့် ကျန်းမာရေး မေးခွန်းနံပါတ် (၁) ၏ အဖြေကို ပြန်လည်ပေးပို့ရန် လိုအပ်ပါသည်။ မေးခွန်းနံပါတ် (၁)၏ အဖြေကို နောက်ရရှိမည့် စာတိုတွင် ဖော်ပြသွားမည်ဖြစ်သည်။
၆.၅။ စတုတ္ထမြောက် စာတိုကို ရရှိနိုင်ရန် စာရင်းပေးသုံးစွဲသူများအနေဖြင့် ကျန်းမာရေးမေးခွန်းနံပါတ် (၂) ၏ အဖြေကို ဖြေဆိုရန် လိုအပ်ပါသည်။ မေးခွန်းနံပါတ် (၂) ၏ အဖြေကို နောက်ရရှိမည့် စာတိုတွင် ဖော်ပြသွားမည် ဖြစ်သည်။
၆.၆။ အထက်ဖော်ပြပါ အစီအစဉ်အတိုင်း ဝန်ဆောင်မှု Package တစ်ခု ပြီးစီးသည်အထိ လုပ်ဆောင် ပေးမည် ဖြစ်သည်။
၆.၇။ စာရင်းပေးသုံးစွဲသူများသည် မေးခွန်းနံပါတ် (၆) ကို ကျန်းမာရေးမေးခွန်း (၅) ၏ အဖြေနှင့်အတူ ရရှိမည် ဖြစ်သည်။ ထိုမေးခွန်းနံပါတ် (၆) ၏ အဖြေကို ပြန်လည်ပေးပို့ပြီးသည့် အချိန်မှသာ ဉာဏ်စမ်းမေးခွန်း မရှိတော့ကြောင်း ဖော်ပြသည့် စာတို “Out-Of-Quiz”ကို ရရှိမည် ဖြစ်ပြီး ထပ်မံ ဝယ်ယူရန် အတွက် ကုဒ်နံပါတ် 8123 သို့ HTQ ဟု ပေးပို့ရပါမည်။ Package တစ်ခုတွင် ကျန်းမာရေးအကြံပြုချက် တစ်ခုနှင့် ကျန်းမာရေးနှင့် သက်ဆိုင်သော မေးခွန်း (၅) ခုသာ ပါဝင်သဖြင့် မေးခွန်းနံပါတ် (၆)အတွက် ရမှတ်နှင့် အဖြေအား ထည့်သွင်းဖော်ပြပေးခြင်း ပြုမည်မဟုတ်ပါ။
၆.၈။ စာတို (SMS) ရရှိမှု ပုံစံ အဆင့်ဆင့်
ပထမ SMS : ကျန်းမာရေးအကြံပြုချက်စာတို
ဒုတိယ SMS : ကျန်းမာရေး မေးခွန်းနံပါတ် ၁
တတိယ SMS : မေးခွန်းနံပါတ် ၁ ၏ အဖြေနှင့်အတူ ကျန်းမာရေး မေးခွန်းနံပါတ် ၂
စတုတ္ထ SMS : မေးခွန်းနံပါတ် ၂ ၏ အဖြေနှင့်အတူ ကျန်းမာရေး မေးခွန်းနံပါတ် ၃
ပဉ္စမ SMS : မေးခွန်းနံပါတ် ၃ ၏ အဖြေနှင့်အတူ ကျန်းမာရေး မေးခွန်းနံပါတ် ၄
ဆဋ္ဌမ SMS : မေးခွန်းနံပါတ် ၄ ၏အဖြေနှင့်အတူ ကျန်းမာရေး မေးခွန်းနံပါတ် ၅
သတ္တမ SMS : မေးခွန်းနံပါတ် ၅ ၏အဖြေနှင့်အတူ ကျန်းမာရေး မေးခွန်းနံပါတ် ၆
ဝန်ဆောင်မှုရယူထားသူမှ မေးခွန်းနံပါတ် ၆ ၏ အဖြေကို ပြန်လည်ပေးပို့လျှင်
အဋ္ဌမ SMS : ဖြေဆိုနိုင်သည့် မေးခွန်းပမာဏ ကျော်လွန်သွားပါပြီ။ (8123 သို့ HTQ ဟု ပေးပို့၍ ထပ်မံဝယ်ယူပါ။)
၆.၉။ အကယ်၍ ဝန်ဆောင်မှုရယူထားသူအနေဖြင့် ကျန်းမာရေး မေးခွန်းနံပါတ် (၁) ၏ အဖြေကို ပြန်လည်မပေးပို့လျှင် ကျန်ရှိသော မေးခွန်းများကို ထပ်မံရရှိမည် မဟုတ်ပါ။ ဝန်ဆောင်မှု ရယူထားသူသည် အဆင့်အားလုံးကို အောင်မြင်စွာ ပြီးမြောက်စေရန် ကျန်းမာရေးမေးခွန်း တစ်ခုစီတိုင်းကို ဖြေဆိုရန် လိုသည်။
၆.၁၀။ MPT ၏ ဆက်သွယ်မှုဧရိယာပြင်ပ (သို့မဟုတ်) လိုင်းဆွဲအား မကောင်းသော နေရာများ၌ အသုံးပြုမိသည့် အခါမျိုးတွင် စာရင်းပေးသုံးစွဲသူများထံသို့ ပြန်လည်ပေးပို့သော စာတို (SMS) များ ရောက်ရန် ကြာမြင့်ခြင်း၊ အချို့အချိန်မျိုးတွင် လုံးဝရောက်မလာခြင်းများ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
၆.၁၁။ စာရင်းပေးသုံးစွဲသူများမှ ပြန်လည်ပေးပို့သော စာတို (SMS) တိုင်းမှာ အခမဲ့ ဖြစ်သည်။
၇။ ကျန်းမာရေးမေးခွန်း၏ သက်တမ်း
၇.၁။ ကျန်းမာရေးမေးခွန်းတစ်ခု၏ သက်တမ်းမှာ မေးခွန်းစတင်ရရှိသော အချိန်မှစ၍ နောက်တစ်ရက် အတွင်း အလိုအလျောက် ပေးပို့သော Package အသစ်ရရှိချိန်အထိ ဖြစ်ပါသည်။
၇.၂။ ဝယ်ယူထားသောမေးခွန်းအရေအတွက်မှာမူ သက်တမ်းကုန်ဆုံးခြင်းမရှိပဲ မိမိဝယ်ယူထားသော အရေအတွက်အတိုင်း ဝန်ဆောင်မှုကာလအတွင်း စိတ်ကြိုက်ဖြေဆိုနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
၈.၁။ စာရင်းပေးသုံးစွဲသူများသည် တစ်ရက်လျှင် Package တစ်(၁)ခုထက်မက ဝယ်ယူနိုင်သည်။ စာရင်းပေး သုံးစွဲသူများသည် ဝန်ဆောင်မှု Package ကို ထောင်ပေါင်းများစွာသော ဝယ်ယူမှုများ ပြုလုပ်နိုင်သည်။ အတိအကျအနေဖြင့် တစ်ရက်လျှင် အများဆုံး အကြိမ် ၅၀ ဝယ်ယူနိုင်သည့် ကန့်သတ်ချက်ရှိပြီး ၎င်းမှာ ဝန်ဆောင်မှုစတင်သည့် ပထမ(၁)ရက်မှစ၍ ဝန်ဆောင်မှုပြီးသည့် ကာလ အထိ အများဆုံးပမာဏအနေဖြင့် ဖြည့်သွင်းမှုစုစုပေါင်း ၉၁၅၀ (၅၀ ကြိမ် x ၁၈၃ ရက်) အထိ ပြုလုပ်နိုင်မည် ဖြစ်သည်။
၈.၂။ Package တစ်ခုချင်းစီတိုင်းအတွက် ၁၄၉ ကျပ် ပေးဆောင်ရမည် ဖြစ်သည်။
၈.၃။ စာရင်းပေးသုံးစွဲသူများ အနေဖြင့် ကုဒ်နံပါတ် 8123 သို့ HTQ ဟု ပေးပို့ပြီး Package များကို မိမိတို့ဆန္ဒရှိသည့် အလျောက် အကြိမ်ပေါင်းများစွာ ဝယ်ယူနိုင်မည် ဖြစ်သည်။
၉။ Season အသစ် ပြောင်းလဲခြင်း
စာရင်းပေးသုံးစွဲသူများ၏ ယခင် Season မှ ရရှိခဲ့သော အမှတ်များကို နောက် Season သို့ သယ်ဆောင်သွားမည် မဟုတ်ပါ။ Season အသစ်စသည်နှင့်တပြိုင်နက် စာရင်းပေးသုံးစွဲသူများ၏ အမှတ်များအားလုံးကို သုညမှ အလိုအလျောက် ပြန်လည် စတင်စေမည် ဖြစ်သည်။ စာရင်းပေးသုံးစွဲသူများအား ဝန်ဆောင်မှုကို မပယ်ဖျက်သရွေ့ Season အသစ်တွင်လည်း တူညီသောနှုန်းထားဖြင့် ဆက်လက်ကောက်ခံသွားမည် ဖြစ်သည်။
၁၀.၁။ အမှတ်ပြိုင်ပွဲ (“အမှတ်ပြိုင်ပွဲ”သို့မဟုတ် ”ပြိုင်ပွဲ”) မှာ ဝန်ဆောင်မှုကို စာရင်းပေးသုံးစွဲသူများအတွက် ပြိုင်ပွဲတစ်ခု ဖြစ်သည်။ ပြိုင်ပွဲအတွင်း အမှတ်အများဆုံး ရရှိသည့် စာရင်းပေးသုံးစွဲသူများသည် ဆုရရှိသူများဖြစ်မည်ဖြစ်ပြီး အမှတ်ပြိုင်ပွဲအတွက် ဆုလက်ဆောင်များ ထုတ်ယူနိုင်မည် ဖြစ်သည်။
၁၀.၂။ စာရင်းပေးသုံးစွဲသူသည် ဝန်ဆောင်မှု Package ဝယ်ယူမှုတစ်ခုချင်းစီတိုင်းနှင့် အောင်မြင်စွာ သက်တမ်းတိုးသည့်အခါတိုင်း အမှတ်ငါးဆယ် (၅၀) ရရှိမည်ဖြစ်သည်။
၁၀.၃။ ဖြေဆိုသည့် အဖြေမှန်လျှင် အဖြေမှန်တစ်ခုစီအတွက် အမှတ် (၂၀) ရရှိမည် ဖြစ်သည်။
၁၀.၄။ ဖြေဆိုသည့် အဖြေမမှန်ကန်လျှင် ကြိုစားသည့် အကြိမ်တိုင်းအတွက် (၁၀) မှတ်စီ ရရှိမည် ဖြစ်သည်။
၁၀.၅။ စာရင်းပေးသုံးစွဲသူအနေဖြင့် လက်ရှိ ရရှိထားသော အမှတ်များကို သိနိုင်ရန် ကုဒ်နံပါတ် 8123 သို့ POINTS ဟုပေးပို့၍ စစ်ဆေးနိုင်သည်။ သက်ဆိုင်ရာ ကာလတစ်ခု ပြီးဆုံးသွားသောအခါ ၎င်းကာလဆုအတွက် အမှတ်သည် သုညမှ ပြန်လည်စတင်မည် ဖြစ်သည်။
၁၀.၆။ လစဉ်ဆုအတွက် ဆုရရှိသူကို ရွေးချယ်ရာတွင် အဆိုပါသတ်မှတ်ထားသော လအတွင်း အမှတ် အများဆုံး ရရှိသူအား ပေးအပ်မည် ဖြစ်သည်၊၊
၁၀.၇။ Grand ဆုအတွက် ဆုရရှိသူကို ရွေးချယ်ရာတွင် ဝန်ဆောင်မှု Season စတင်သည် မှစ၍ ပြီးဆုံးချိန် အတွင်း အမှတ်အများဆုံးရရှိသူအား ပေးအပ်မည် ဖြစ်သည်။
၁၁။ အမှတ်ပြိုင်ပွဲတွင် အကျုံးဝင်ခြင်း
Season တစ်ခုတွင် ဝန်ဆောင်မှုကို စာရင်ပေးသုံးစွဲသူတိုင်းသည် အမှတ်ပြိုင်ပွဲအတွက် သတ်မှတ်ကာလများတွင် အကျုံးဝင်နေမည်ဖြစ်ပါသည်။ အမှတ်ပြိုင်ပွဲ ဖြစ်သည့်အတွက် သက်ဆိုင်ရာ ကာလအတွင်း အမှတ်အများဆုံးရရှိသော စာရင်းပေးသုံးစွဲသူများသာ ဆုရရှိမည် ဖြစ်သည့်အတွက် မေးခွန်းများများဖြေပြီး အမှတ်များကို စုဆောင်းသင့်ပါသည်။
၁၂။ အမှတ်ပြိုင်ပွဲအတွက် ဆုလက်ဆောင်များ
၁၂.၁။ စာရင်းပေးသုံးစွဲသူများကို အပတ်စဉ်၊ လစဉ်၊ နှင့် Grand ဆု စသဖြင့် ဆုလက်ဆောင် များ အသီးသီး ပေးအပ်သွားမည် ဖြစ်သည်။
၁၂.၂။ ဆုလက်ဆောင်အမျိုးမျိုးကို ကာလတလျှောက် အမှတ်အများဆုံး ရရှိသူများအား အသီးသီး ပေးအပ်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
၁၃.၁။ ကံစမ်းမဲအစီအစဉ် (“ကံစမ်းမဲအစီအစဉ်” သို့မဟုတ် “အစီအစဉ်”) သည် ဝန်ဆောင်မှု စာရင်းပေးသုံးစွဲသူများ အတွက် အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
၁၃.၂။ ကံထူးသူများကို သတ်မှတ်ချက် ပြည့်မှီသည့် စာရင်းပေးသွင်းမှုထဲမှ ကျပန်းစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ် သွားမည် ဖြစ်သည်။ ရမှတ်များများ ရရှိလေ ပါဝင်သူများအတွက် ကံထူးရန် အခွင့်အလမ်း ပိုမိုများပြားလေ ဖြစ်သည်။
၁၄။ ကံစမ်းမဲအစီအစဉ်တွင် အကျုံးဝင်ခြင်း
၁၄.၁။ အပတ်စဉ်ဆုအတွက် ကံစမ်းမဲအစီအစဉ်တွင် အကျုံးဝင်ခြင်း - သက်ဆိုင်ရာ အပတ်အတွင်း အနည်းဆုံး တစ်ကြိမ် စာရင်းပေးသုံးစွဲတိုင်း အစီအစဉ်တွင် ပါဝင်ခွင့်ရမည်ဖြစ်သည်။
၁၄.၂။ Grand ဆုအတွက် ကံစမ်းမဲအစီအစဉ်တွင် အကျုံးဝင်ခြင်း - ဝန်ဆောင်မှုကာလတလျှောက်လုံးတွင် အနည်းဆုံး တစ်ကြိမ် စာရင်းပေးသုံးစွဲတိုင်း အစီအစဉ်တွင် ပါဝင်ခွင့်ရမည်ဖြစ်သည်။
၁၅။ ကံစမ်းမဲအစီအစဉ်အတွက် ဆုလက်ဆောင်များ
၁၅.၁။ စာရင်းပေးသုံးစွဲသူများကို အပတ်စဉ်၊ နှင့် Grand ဆု စသည်ဖြင့် ဆုလက်ဆောင်များ အသီးသီး ပေးအပ်သွားမည် ဖြစ်သည်။
၁၅.၂။ ဆုလက်ဆောင်အမျိုးမျိုးကို ကာလတလျှောက် ကံထူးသူများအား အသီးသီး ပေးအပ်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
၁၆။ အမှတ်ပြိုင်ပွဲ နှင့် ကံစမ်းမဲအစီအစဉ် တို့၏ ဆုလက်ဆောင်များအတွက် အချိန်ကာလ သတ်မှတ်ချက် များ
အောက်ပါ အချိန်ကာလ သတ်မှတ်ချက်များကို ရည်ညွှန်းပါသည်။
အပတ်စဉ်ဆု အချိန်ကာလ : အင်္ဂါနေ့ ၀၀:၀၀:၀၀ မှ တနင်္လာနေ့ ၂၃:၅၉:၅၉ အထိ
လစဉ်ဆု အချိန်ကာလ : လတစ်လ၏ ၁ ရက် ၀၀:၀၀:၀၀ မှ လကုန်ရက် ၂၃:၅၉:၅၉ အထိ
Grandဆု အချိန်ကာလ : ဝန်ဆောင်မှု Season ပထမဆုံးရက် ၀၀:၀၀:၀၀ မှ ဝန်ဆောင်မှု Season
နောက်ဆုံးရက် ၂၃:၅၉:၅၉ အထိ
၁၇။ အမှတ်ပိုရရှိနိုင်ရန် နည်းလမ်းများ
ဝန်ဆောင်မှုရယူထားသူများအနေဖြင့် ပက်ကေ့ချ် အပိုလက်ဆောင် မှ လည်းကောင်း၊ အထူးအစီအစဉ်များမှ လည်းကောင်း အမှတ်ပို ရရှိနိုင်ပါသည်။
၁၇.၁။ OTP (ထပ်ဆောင်းဝယ်ယူမှု) ပက်ကေ့ချ်အပို လက်ဆောင်
ဝန်ဆောင်မှုရယူထားသူအနေဖြင့် HTQ ဟု ပေးပို့ပြီး ပက်ကေ့ချ် (၁၀) ခု ဝယ်ယူတိုင်း ပက်ကေ့ချ် အပို လက်ဆောင် (၁) ခု ရရှိမှာ ဖြစ်ပါသည်။ စာရင်းပေးသွင်းထားသောကြောင့် ပုံမှန်ရရှိမည့် ပက်ကေ့ချ် တစ်ခုအား ထည့်တွက်မည် မဟုတ်ပါ။
၁၇.၂။ Real-Time Mechanics
Real-Time Mechanics တွင် Happy Hour ၊ Weekend Challenge ၊ ဖောက်သည် ဟူ၍ နည်းလမ်း (၃) မျိုး ရှိသည်။
Happy Hour သည် အပတ်စဉ် တနင်္လာနေ့မှ သောကြာနေ့ ည (၇)နာရီ မှ (၉)နာရီအတွင်း အချိန် ၂ နာရီ ကြာမြင့်မည် ဖြစ်သည်။ Happy Hour အတွင်း ဖြေဆိုသော ဉာဏ်စမ်းများ၏ ရမှတ်များသည် အလိုအလျောက် နှစ်ဆ ပြောင်းလဲသွားမှာ ဖြစ်ပါသည်။
Happy Hour တွင် ရရှိလာသော အမှတ်များကို နောက်ဆုရရှိမည့် ပြိုင်ပွဲအမှတ်စာရင်းထဲတွင် ထည့်ပေါင်းပေးပါသည်။
Weekend Challenge သည် အပတ်စဉ် စနေနေ့နှင့်တနင်္ဂနွေနေ့များ တွင် ရမှတ် အများဆုံး ဝယ်ယူဖြေဆိုနိုင်သူအား အမှတ်အပိုဆောင်း ၅၀၀၀ ထည့်ပေါင်းပေးမယ့် အစီအစဉ် ဖြစ်ပါသည်။ (စနေနေ့ မနက် ၀၀:၀၀ နာရီ မှ တနင်္ဂနွေနေ့ ည ၁၁:၅၉ နာရီ အထိ)
Weekend Challenge တွင် ရရှိလာသော အမှတ်များကို နောက်ဆုရရှိမည့် ပြိုင်ပွဲအမှတ်စာရင်းထဲတွင် ထည့်ပေါင်းပေးပါသည်။
၁၇.၂.၃။ Loyalty Bonus (ဖောက်သည်)
စာရင်းပေးပြီး (၁၀) ရက် ဆက်တိုက် ဝန်ဆောင်မှု မှာ နေ့စဉ် ပါဝင်သူများကို ဖောက်သည် အဖြစ်သတ်မှတ်ပြီး (၁၀) ရက် ပြည့်တိုင်း အမှတ် ၁၀၀၀ ကို အပိုဆောင်း ထည့်ပေါင်းပေးမှာ ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ (၁၀) ရက်အတွင်း လက်ကျန်ငွေ မလုံလောက်၍ ငွေကောက်ခံ မရသောအခါ (သို့) (၁၀) ရက် မပြည့်မီ ဝန်ဆောင်မှု မှ နှုတ်ထွက်သောအခါ ဖောက်သည် ဟု သတ်မှတ်မည် မဟုတ်ပါ။
ဖောက်သည် ဖြစ်ခြင်းကြောင့် ရရှိလာသော အမှတ်များကို နောက်ဆုရရှိမယ့် ပြိုင်ပွဲ အမှတ် စာရင်းထဲမှာ ထည့်ပေါင်းပေးပါသည်။
၁၈။ ကျန်းမာရေးဉာဏ်စမ်း ဝန်ဆောင်မှုကို ရယူအသုံးပြုနိုင်သူများ
ဝန်ဆောင်မှုကို ရယူလိုလျှင် အောက်ပါအချက်များနှင့် ကိုက်ညီရပါမည်။
• အသက် (၁၈) နှစ်နှင့် အထက် စာရင်းပေးသုံးစွဲသူများ (သို့မဟုတ်) (၁၈) နှစ်အောက်ဖြစ်ပါက ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုရန် မိဘ/အုပ်ထိန်းသူ၏ ခွင့်ပြုချက် ရရှိသူများ
၁၉။ အမှတ်ပြိုင်ပွဲ နှင့် ကံစမ်းမဲ အစီအစဉ်တွင် ပါဝင်ခွင့်မရှိသူများ
အောက်ဖော်ပြပါအချက် (၁)ခုနှင့် ညှိစွန်းပါက ဆုအစီအစဉ်တွင် ပါဝင်ခွင့် မရှိပါ။
• MPT SIM Card အသုံးမပြုသူများ (သို့မဟုတ်) ဝန်ဆောင်မှုကို ရယူမထားသူများ
• ဤပြိုင်ပွဲကို စီစဉ်သည့် ကုမ္ပဏီများတွင် အလုပ်လုပ်သူများ၊ MPT၊ Trust Oo နှင့် ဤဝန်ဆောင်မှု နှင့် တိုက်ရိုက် သက်ဆိုင်သော ၎င်းတို့၏ မိတ်ဖက် အဖွဲ့အစည်းများ
၂၀။ အမှတ်ပြိုင်ပွဲ နှင့် ကံစမ်းမဲ အစီအစဉ်တွင် ဆုလက်ဆောင်များ ရရှိနိုင်သော အခွင့်အရေးများ
စာရင်းပေးသုံးစွဲသူ တစ်ဦးတည်းသည် အမှတ်ပြိုင်ပွဲ နှင့် ကံစမ်းမဲအစီအစဉ် နှစ်ခုလုံးအတွက် ဆုလက်ဆောင် များကို တပြိုင်နက်တည်း ရယူနိုင်သည့် အခွင့်အရေးရှိသည်။
၂၁။ အသိပေးအကြောင်းကြားခြင်းနှင့် ဆုလက်ဆောင်များ ထုတ်ယူခြင်း
၂၁.၁။ ဆုရရှိသည့် စာရင်းပေးသုံးစွဲသူများအား ဆုရရှိကြောင်းကို ဆုရရှိသည့်နေ့မှစ၍ (၂)ပတ် အတွင်း အသိပေး အကြောင်းကြားသွားမည် ဖြစ်သည်။ ဝန်ဆောင်မှုပံ့ပိုးသူသည် ထိုစာရင်းပေးသုံးစွဲသူအား ဝန်ဆောင်မှု စာရင်းပေးသုံးစွဲစဉ်က အသုံးပြုခဲ့သော MPT မိုဘိုင်းလ်နံပါတ် (MSISDN) ကို ဆက်သွယ်မည်ဖြစ်သည်။ ဆုရရှိသူများကို ရရှိသောဆုများအား မည်သို့ ထုတ်ယူရမည်ကို ဖုန်းဆက်အကြောင်းကြားရာတွင် အသေးစိတ် ရှင်းလင်းပြောကြားပေးသွားမည် ဖြစ်သည်။
၂၁.၂။ ဆုရရှိကြောင်း အကြောင်းကြားချိန်တွင် ဆုရရှိသူမှ ကျန်းမာရေးဉာဏ်စမ်း ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုနေဆဲ မဟုတ်ပါက ဆုရရှိခြင်းကို ပယ်ဖျက်သွားမည် ဖြစ်သည်။
၂၁.၃။ ဆုရရှိသော စာရင်းပေးသုံးစွဲသူများသည် ဆုလက်ဆောင်များကို ဝန်ဆောင်မှုပံ့ပိုးသူ၏ ရုံးလိပ်စာ ဖြစ်သော အမှတ် ၁၄၈ (၁၁/က)၊ မြမာလာလမ်းသွယ်၊ အေဝမ်းလမ်း၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ၊ ရန်ကုန်မြို့ ၊ မြန်မာနိုင်ငံတွင် လာရောက် ထုတ်ယူရမည် ဖြစ်သည်။ ဆုလက်ဆောင်များကို ဝန်ဆောင်မှုပံ့ပိုးသူ၏ အစီအစဉ်အရ MPT ရုံး၊ ဗိုလ်အောင်ကျော်လမ်း (သို့မဟုတ်) အခမ်းအနား တစ်ရပ်တွင်လည်း ပေးအပ်သွားနိုင်ပါသည်။
၂၁.၄။ ဆုရရှိသော စာရင်းပေးသုံးစွဲသူများသည် ဆုလက်ဆောင်များကို ထုတ်ယူရာတွင် အောက်ဖော်ပြပါ သက်သေအထောက်အထားများ တင်ပြရမည်ဖြစ်သည်။
(က) မှတ်ပုံတင် (သို့မဟုတ်) နိုင်ငံကူးလက်မှတ် (သို့မဟုတ်) နိုင်ငံခြားသား မှတ်ပုံတင် လက်မှတ် မူရင်း
(ခ) ဝန်ဆောင်မှုကို စာရင်းပေးသုံးစွဲစဉ်က အသုံးပြုထားသော MPT SIM Card
ဆုရရှိသော စာရင်းပေးသုံးစွဲသူများ သည် ဆုပစ္စည်း လက်ခံရရှိကြောင်း စာရွက်စာတမ်း တွင် လက်မှတ် ရေးထိုးပေးရမည် ဖြစ်သည်။
၂၁.၅။ ဆုရရှိသော စာရင်းပေးသုံးစွဲသူအား သုံးကြိမ်အထိ ဖုန်းဖြင့် ဆက်သွယ်၍ မရပါက (သို့မဟုတ်) ဆုရရှိပြီး ရက် (၃၀) အကြာအထိ ဆုပစ္စည်းအား လာရောက်ထုတ်ယူခြင်း မရှိပါက ဝန်ဆောင်မှု ပံ့ပိုးသူက သက်ဆိုင်ရာ ဆုလက်ဆောင်ကို ဖျက်သိမ်းမည် ဖြစ်သည်။
၂၁.၆။ ဝန်ဆောင်မှု ပံ့ပိုးသူသည် ဆုရရှိသူအား ဆုပစ္စည်းထုတ်ယူရန် အချိန်ကာလ ရက် (၃၀) သက်တမ်း မည်သည့်အချိန်တွင် ကုန်ဆုံးမည်ဖြစ်ကြောင်းကို အကြောင်းကြားရန် တာဝန်ရှိမည် မဟုတ်ပါ။
၂၂။ အချက်အလက် ဖော်ပြခြင်း
ဆုရရှိသော စာရင်းပေးသုံးစွဲသူများ သည် ဝန်ဆောင်မှုပံ့ပိုးသူ မှ ဆောင်ရွက်သော အရောင်း မြှင့်တင်ရေးလုပ်ငန်းများ တွင် ဥပဒေ အရ ခွင့်ပြုထားသည့် အတိုင်းအတာ အထိ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ပြီး မိမိ၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အချက်အလက်များဖြစ်သော အမည်များ၊ နေထိုင်ရာဒေသများ၊ ဓာတ်ပုံများနှင့် အသံနှင့်/သို့မဟုတ် ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းများအား လူမှုကွန်ယက် ဆိုဒ်များ၊ ပုံနှိပ်မီဒီယာများနှင့် ရုပ်သံထုတ်လွှင့်မှု ချန်နယ်များတွင် ဖော်ပြထည့်သွင်းခွင့် ကို ဝန်ဆောင်မှုပံ့ပိုးသူ အား ခွင့်ပြုပါသည်။
၂၃။ ဝန်ဆောင်မှုနှင့် ဆက်စပ်၍ ကုဒ်နံပါတ် 8123 သို့ ပေးပို့ရသော အသုံးဝင်သည့် Keyword များ
• ဝန်ဆောင်မှုကို စာရင်းပေးသုံးစွဲရန် - ON
• ဝန်ဆောင်မှုကို ပယ်ဖျက်ရန် - OFF
• Package များကို ထပ်မံဝယ်ယူရန် - HTQ
• ရရှိထားသော လက်ရှိအမှတ်များကို စစ်ရန်- POINTS
• အကူအညီရယူရန် - HELP
• မေးခွန်းများအားဖြေဆိုရန် - 1 (သို့မဟုတ်) 2
By subscribing the Health Tips & Quiz service (herein referred to as the “Service”), the MPT subscribers (the “Subscriber” or “Subscribers”) understand and agree to the terms and conditions (the “Terms and Conditions”) set forth herein. The Service is subject to the Terms and Conditions, and to all applicable laws and regulations of the Republic of the Union of Myanmar.
The Service is operated by Trust Oo Co., Ltd. (the “Service Provider”), having its principle office at 148 (11/A), Mya-mar-lar Lane, A-1 Street, Mayangone Township, Yangon, Myanmar.
2.1 The Service is called Health Tips & Quiz.
2.2 The Service aims to promote health knowledge of the Subscribers without geographical and financial constraints via mobile phones.
2.3 This isaSMS text-based service where the customers can access important health tips whilst havingachance to participate in an interactive health quiz. The Subscribers can enjoy the rewards for either having the highest scores or just being lucky by drawing lots whilst gaining healthcare knowledge on how to liveahealthier lifestyle.
The service package (the “Service Package” or “Service Packages”) includes the total number of one (1) health tip and five (5) health questions.
4.1 Once the users have subscribed the Service, the Subscribers are entitled to receive the Service at the rate of one (1) package per day.
4.2 The Subscribers will be charged at the rate of 149 MMK per Service Package.
5. Service Subscription
5.1 The users can subscribe the service by sending ON to short code 8123.
5.2 The users can unsubscribe the service by sending OFF to short code 8123.
6. Service Flow
6.1 Once the Service has been subscribed, the Subscribers will receive the Welcome Message.
6.2 After receiving the Welcome Message, the Subscribers will receive the first (1st) SMS containing one (1) health tip.
6.3 The Subscribers will then receive the second (2nd) SMS containing health question No. 1.
6.4 To continue to receive the third (3rd) SMS, the Subscribers will have to reply an answer to the health question No. 1. The correct answer of the question No. 1 will be revealed in the next SMS.
6.5 To continue to receive the fourth (4th) SMS, the Subscribers will have to answer the health question No. 2. The correct answer of the question No.2will be revealed in the next SMS.
6.6 The same rule applies for the rest of the process.
6.7 The Subscribers will receiveasixth (6th) question with the answer to fifth (5th) health question, and only when the Subscribers reply an answer to that 6th question, the Subscribers will receive an ‘Out-of-Quiz’ MT afterwards that says there is no more quiz available and the Subscribers should send HTQ to short code 8123 to purchase more. Sinceapackage includes one tip and five questions only, the answer and the point for the sixth question shall not be taken into consideration.
6.8 The following is the structure of the SMS Flow.
1st SMS : Health Tip
2nd SMS : Health Question No. 1
3rd SMS : Answer to Health Question No. 1
Health Question No. 2
4th SMS : Answer to Health Question No. 2
Health Question No. 3
5th SMS : Answer to Health Question No. 3
Health Question No. 4
6th SMS : Answer to Health Question No. 4
Health Question No. 5
7th SMS : Answer to Health Question No. 5
Health Question No. 6
If the Subscribers reply an answer to the question No. 6,
8th SMS : Out-of-Quiz (Send HTQ to short code 8123 to purchase more.)
6.9 If the subscriber does not reply to the first (1st) health question, the rest of the health quiz will not be delivered. The subscriber needs to reply to every single health question in order to complete the process.
6.10 There might be times when the delivery of the SMS is delayed if the user was in out-of-service area or poor mobile network connection.
6.11 The reply SMS of the Subscribers will be free of charge.
7. Expiration of Health Quiz
7.1 The health question received onaparticular day shall expire when the Subscriber receivesanew package which is automatically sent by the Service Provider on the very next day.
7.2 However, the total number of questions purchased by the Subscriber shall not expire and the Subscriber can answer the same number of questions anytime during the service period.
8. Additional Purchase
8.1 The Subscribers can purchase more than one (1) package per day. The Subscribers can make thousands of purchases of the Service Package. To be exact, there isalimitation ofafifty (50) charges per day that accumulates since day one (1) of Service commencement, reachingamaximum quota of 9,150 charges (50 x 183 days) at the end of the Service.
8.2 The Subscribers will have to pay 149 MMK for every single package.
8.3 The Subscribers can purchase as many packages as the Subscribers desire by sending HTQ time and again to the short code 8123.
9. Change of Conditions in New Season
The points which the subscribers earned in the previous season shall not be carried over in the next season. The system will automatically reset the points of all the subscribers to zero (0) in the beginning of new season.
The subscribers will keep being charged at the same rate in the new season unless they unsubscribe the service.
10. Point Contest
10.1 The point contest (the “Point Contest” or “Contest”) isacontest for the users who subscribe the Service. The Subscribers with the highest scores during the Contest will be the winners and able to claim the rewards for the Point Contest.
10.2 The Subscriber will receive fifty (50) points for each and every purchase of Service Package and successful renewal.
10.3 If the answers are correct, the Subscriber will receive twenty (20) points each for every correct answer.
10.4 If the answers are wrong, the Subscriber will receive only ten (10) points each for the attempt.
10.5 The Subscriber can check the current points by sending POINTS to short code 8123. The score shall be reset to zero (0) after the corresponding period has ended.
10.6 Monthly prize winner is the person who scores the highest point within that particular month.
10.7 Grand prize winner is the person who scores the highest point over the entire season.
11. The Eligibility of Prize for Point Contest
Every subscriber will be eligible for every period of Point Contest inaparticular season. Beingacompetition for points, the subscribers who have the highest scores will win the prizes. Hence, the subscribers are recommended to collect more points by answering more questions to win the prizes.
12. Rewards for the Point Contest
12.1 The Subscribers will be rewarded on weekly, monthly and grand basis.
12.2 Different prizes will be rewarded to the Subscribers with the highest scores for the Contest during the service period.
Third Prize - 32” TV
The Rewards according to the following schedule shall be rewarded to the winners.
1st Oct 2019 - 31st Mar 2020 :First Prize - Honda Click Motor Cycle+ Genius Trophy(Large)
13. Lucky Draw Program
13.1 The Lucky Draw Program (the “Lucky Draw Program” or “Program”) isaprogram for the users who subscribe the Service.
13.2 The winners shall be randomly selected from all the eligible entries. The more points the participants earn, the higher the chance for the participant to win the lucky draw.
14. The Eligibility of Prize for Lucky Draw Program
14.1. Weekly prize for Lucky Draw Program: Customers are eligible if they have subscribed the service at least once within that particular week.
14.2. Grand Prize for Lucky Draw Program: Customers are eligible if they have subscribed the service for at least once over the entire season of the Service.
15. Rewards for the Lucky Draw Program
15.1 The Subscribers will be rewarded on weekly, monthly and grand basis.
15.2 Different prizes will be rewarded to the Subscribers during the service period.
The Rewards according to the following schedule will be rewarded to the winners.
16. Intervals for the Rewards for Point Contest and Lucky Draw Program
Please refer to the following time interval.
• Weekly Reward Period : Tuesday 00:00:00 till next Monday 23:59:59
• Monthly Reward Period : Day 1 00:00:00 of the month till the last day 23:59:59 of the month
• Grand Reward Period : Day 1 00:00:00 of the service season till the last day 23:59:59 of the
17. Ways to get additional points
The subscribers can get additional points via One-time-purchase (OTP) Bonus Package and Real-Time Mechanics.
17.1 One-Time-Purchase (OTP) Bonus Package
17.2 Real-Time Mechanics
There are three kinds of Real-Time Mechanics: Happy Hour, Weekend Challenge, and Loyalty Bonus.
17.2.1 Happy Hour
The points earned during Happy Hour shall be added to the upcoming prize programs.
17.2.2 Weekend Challenge
The points earned during Weekend Challenge shall be added to the upcoming prize programs.
17.2.3 Loyalty Bonus
18. Eligible Participants for the Health Tips & Quiz service
19. Ineligible Participants for Point Contest and Lucky Draw Program
20. Chances to win the Rewards for both Point Contest and Lucky Draw Program
A single Subscriber is entitled to win the Rewards for both Point Contest and Lucky Draw Program at the same time.
21. Notification and Claiming the Rewards
21.1 The Subscribers who win the prizes shall be contacted within two (2) weeks to be notified about winning the prize. The Service Provider shall contact the MPT mobile number (MSISDN) the Subscriber utilised in subscribing and using the Service. During the call of notification, the winner will be provided with the details on how to claim the prize.
21.2 While notifying about the prize to the winner, the prize shall be cancelled if the winner is not an active subscriber at the time of notification.
21.3 The Subscribers who win the Rewards shall claim them at the Service Provider’s office which is located at 148 (11/A), Mya-mar-lar Lane, A-1 Street, Mayangone Township, Yangon, Myanmar. The Rewards may also be handed to the winners at MPT Office (Bo-Aung-Kyaw) or ataspecial event at the discretion of the Service Provider.
21.4 The Subscribers who win the Rewards need to present the following proof of evidence when claiming the Rewards.
a. Original National ID card or Passport or Foreign Registration Certificate and
b. MPT SIM card which was utilised in subscribing and using the Service.
The Subscribers who win the Rewards shall sign an Acceptance of Reward document.
21.5 If the Subscriber who win the reward cannot be contacted for three attempts of phone call or has not claimed the reward within 30 days from winning, the Service Provider shall cancel the respective reward.
21.6 The Service Provider does not have an obligation to notify the winner about when that 30-day period shall expire or when it has expired.
22. Provision of Information
The Subscribers who win the Rewards agree to take part in the promotional activities of the Service Provider till the extent permitted by law, and allow the Service Provider to disclose their personal information such as names, townships, photographs, and audio and/or visual recordings to be published on the social nerworking sites, print media and or broadcasting channels.
23. Useful Keywords to be Sent to the Short Code 8123 with regards to the Service
To subscribe the service : ON
To unsubscribe the service : OFF
To purchase additional packages : HTQ
To check the current scores : POINTS
To ask for help : HELP
To play the quiz : 1 (or) 2